Fiteny persana - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Persian language)
Afganistana, Bahreina, Iràka, Kazakstana, Tajikistana, Ozbekistana,
Azia Andrefana, Azia Afovoany
faha 22 (tenin-dreny)
fanoratana perso-Arabika, Sirilika
Akademian'ny fiteny persana sy haisorana, Akademian'ny siansa any Afganistana
per (B)Endrika:Infobox Language/terminological
prs – Persana atsinanana
pes – persana andrefana
Sarintany maneho ny faritra ahitana ny mpiteny persana.
Ny fiteny persana na fiteny farsy na fiteny persiana dia tenim-pirenenan' i Irana, ao amin' ny fianakaviana indô-eorôpeana, ao amin' ny sampana indô-iraniana, ao amin' ny zana-tsampana iraniana. Mahery ny 60 tapitrisa ny isan' ny mpiteny persana any Iràna ary ny any Afganistana misy 16 tapitrisa. Misy mpiteny persana koa ny any Tajikistàna, ny any Bareina ary ny any Ozbekistàna (foko tajiky). Atao hoe فارسی / fārsī ny anaran' ny fiteny persana any Iràna sy any Afganistàna. Endrika arabon' ny teny hoe parsi, ny hoe farsi satria tsy manana renifeo p ny abidy arabo.
Manana satam-piteny ôfisialy ny fiteny persana anatin' ireo firenena telo ireo: endriky ny fiteny persàna isam-paritra ny fiteny dary (fiteny ôfisialy ao Afganistàna) sy ny fiteny tajiky (fiteny ôfisialin' i Tajikistàna) izay tenenina koa ao Kirgizistàna, ao Torkmenistàna, ao Ozbekistàna ary koa ao Kazakstàna. Ny totalin' ny mpiteny persana dia misy 75 tapitrisa.
Ny rafi-pehezanteniny dia SOV. Soratana amin' ny alalan' ny abidy arabo ny fiteny persana na dia tsy manam-pifandraisana amin' ny fiteny arabo aza izy na amin' ny lafiny voambolana na amin' ny lafiny ara-drafi-peo. Any Tajikistàna (sy any Ozbekistàna miteny persana) dia soratana amin' ny abidy sirilika ny fiteny tajiky.
Fiteny iraniana sasantsasany: fiteny zazaky - fiteny ôsetiana - fiteny lôry - fiteny korda - fiteny persana - fiteny dary - fiteny tajiky - fiteny pastô - fiteny balotsy - fiteny gilaky - fiteny talisy - fiteny mazandarany.
Persian language Archived Mey 30, 2008 at the Wayback Machine (Persian)
Raki-bolana persana-frantsay/frantsay-persana Freelang
((en)) Western Farsi (Languages of the World) Archived Martsa 9, 2009 at the Wayback Machine
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiteny_persana&oldid=1045174"
Voaova farany tamin'ny 15 Mey 2022 amin'ny 13:30 ity pejy ity.